အောက်ဖော်ပြပါ Website တွေမှာ နိုင်ငံခြားကားတွေ ကြည့်လို့ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ ~ ITmanHOME
03:52 နိုင်ငံခြားကားတွေ ကြည့်လို့ရမယ် No comments
အောက်ဖော်ပြပါ Website တွေမှာ နိုင်ငံခြားကားတွေ ကြည့်လို့ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။
http://www.mysoju.com/ Korea Drama -
အားလုံး Access Denied တဲ့ ဘယ်လိုကျော်ရပါ့
http://www.proxfree.com/ D ka nay win lo. ya par tal
ရုပ်ရှင်နာမည်က Million Dolla Crocodile ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
English Subtitle နဲ့ကြည့်လို့ရမယ့် တရုတ်ကားပါ။
youtute link နဲ့တကွ member ကို Kyaw Swar က Share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Title: Million Dolla C...rocodile
Stars: Barbie Hsu, Guo Tao, Lam Suet, Shi Zhaoqi, Xiong Xinxin, Li Qinqin, Fang Qingzhuo, Purba Rgyal, Wang Jinsong, Che Jin
Xiao Xing,ageneral little boy lives in little town, Mei Jia Wu, is his in grade four. He hasabest friend named Amao, who is an eight-meters long crocodile. They get alone with each other, peacefully.Many years, Amao has been living inalocal crocodile farm ran by tough Bald Liu who caught Amao from Thailand. But this year, Bald Liu has to sell all the crocodiles cause the poor management. Unfortunately, the notorious tricky businessman Zhao Da Zui bought them all for developingaseries crocodile meals. When the crocodiles are going to be killed by slaughters, Amao pulled apart the ropes angrily, and lead all crocodiles fighting for their lives and killed the chef and escaped. This incident breaks the little town, Mei Jia Wu's quiet and easy life. Xiao Xing and his father Da Wei Wang were all involved.
၂၀၀၂ အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုတွေ အများကြီးဆွတ်ခူးထားခဲ့တဲ့ Mekhong Full Moon Party အမည်ရ ရုပ်ရှင်ပါ။ Member ကိုကျော်စွာ Share ပေးတာပါ။
အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့်ကတော့ နယ်စပ်တနေရာနဲ့စပ်နေတဲ့ဒေသတခုနဲ့ထိနေတဲ့ မဲ့ခေါင်မြစ်မှာ နိုဝင်...ဘာလ (တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်)ကြရင် နဂါးတွေကောင်းကင်ပေါ်တက်ပြီး အစည်းဝေးထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတခုဖြစ်ပေါ်တာကိုအခြေခံထားတာပါ။ အဲ့ဒီအဆိုကြောင့် အဲ့လပြည့်ချိန်မှာဆိုရင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က လူတွေ လာပြီးထိုင်စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။ ပုံထဲမှာ ပါတဲ့ အလင်းလေးတွေက သူတို့ပြောတဲ့ နဂါးတွေ ကောင်းကင်ပေါ်ကိုတက်နေတဲ့ပုံပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်ကတော့ အဲ့ဒီအလင်းလေးတွေဟာ........ မှတ်မိတော့ဘူး... ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘဲ ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ :D -
Writer: Jira Maligool
Stars: Thidarat Chareonchaichana, Noppadol Duangporn and Boonchai Limathibul